အသက်၁၃နှစ်နဲ့ ကိုယ်ဝန်(၅)လရှိခဲ့တဲ့ (၇)တန်းကျောင်းသူ မိန်းကလေးရဲ့ အဖြစ်... - Achawlaymyar
အသက်၁၃နှစ်နဲ့ ကိုယ်ဝန်(၅)လရှိခဲ့တဲ့ (၇)တန်းကျောင်းသူ မိန်းကလေးရဲ့ အဖြစ်…
November 22, 2020 by Achawlaymyar
မနေ့က ကျမဆေးခန်းကို ultrasound ကြည့်ဖို့သားအမိနှစ်ယောက်လာပါတယ် သူတို့သားအမိဝင်လာတုန်းကတော့..ရင်သားတဖက်မရှိ တဲ့ မိခင်ကို လှမ်းကြည့်ရင်း.လူနာလို့ထင်မိတာပါ။
နောက်တော့မှ..ကျမသမီးလေးရာသီ မလာတာ 3လလောက်ရှိပြီ..ဗိုက်မှာလည်း အလုံးပေါ်နေလို့ဆိုမှ ကလေးဗိုက်ကိုစပ်းသပ်ကြည့်လိုက်တော့..ဗိုက်ထဲမှာ ကိုယ်ဝန်က 5လပြည့်ခါနီးပါပြီ..း။
ကလေးရဲ့ အသက်ကိုသေချာသိချင် လို့မွေးနေ့မေးလိုက်မှ 13နှစ်နဲ့ တစ်လ..ဗိုက်ထဲက ကိုယ်ဝန်က 5လ.. .ရှင်းရှင်းပြောရရင်.အမွှေးတောင်သေချာမပေါက်သေးတဲ့ .မျက်နှာ အေးအေးလေးနဲ့ ကလေးကိုကြည့်ပြီး ကျမ ဘယ်ကနေ စပြောရမလည်းတောင်တွေးမရတော့ပါ
မတတ်နိုင်အမေကိုရှင်းပြတော့ပြီး.သမီးရည်းစား ရှိသလားချော့မေးတော့..ရည်းစားတော့မရှိ… အပျိုမဟုတ်တဲ့ အဆောင်နေသူငယ်ချင်း ဆီကဘောင်းဘီယူဝတ်မိ သည်ဟုပြောသည်..လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူး..အမှန်အတိုင်းပြောဖို့နည်းနည်းလေး မာန်လိုက်တော့..မှ.တတန်းထဲနေ.သူငယ်ချင်း နှင့်. .ဟုဝန်ခံလာလေသည်
fbပေါ်မှာ ဟိုတလောကေ ခတ်စားနေတဲ့ရေကူးကန်ထဲကိုယ်ဝန်ခုနှစ်ယောက်ရတဲ့. မဟုတ်တဲ့ post ကို ဖတ်ပြီး..အမေကို..ဘောင်းဘီ ကိစ္စနှင့်ဖြီးတော့ အူကြောင်ကြောင်အမေက သို့လောသို့လော ဖြစ်သည်
ဒီအမေနှင့် လွှတ်ထားလို့မပြီး..ငါဝင်ပါမှ ဖြစ်မည် ဆိုပြီး ဆက်မေးမှ..ကျမ ဖင်ထိုင်ရက်ကျမတတ်.. တတန်းတည်းကျောင်းသား..သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း အဆင့်လောက်တွေနှင့် ..အတူနေကြသည်တဲ့ သူတို့ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းရဲ့….ညဖက်စာကြည့်ချိန်တွေမှာ. ညဖက်အတန်းလွတ်တွေထဲသွားကြသော .အဲသလိုကလေးတွေ…တော်တော်များနေပုံရသည် ..
သူပြောတဲ့ ဘောင်းဘီယူဝတ်တဲ့ သူငယ်ချင်း ကလည်း ရည်းစားမဟုတ်ပဲ အတူနေကြသည်တဲ့..ေ နာက်တတွဲကတော့ ရည်းစားပေါ့…7တန်းတွေနော် တခန်းထဲအတူတူ..ချိန်းနေကြသည်တဲ့..3တွဲ ကဲ..ကလေးမို့ တခါတလေမှား သလားလို့ကြိမ်ရေမေးတော့ .ကြိမ်ရေမနည်းတော့ပါ…
သမီးတို့အတန်းက..အဲသလို ကြိုက် ကြတာနည်းတယ် 9တန်း 10တန်းဆိုပိုခြိန်းတွေ့ကြတာလို့ပြောတော့ ကမြ ပက်လက်လန် ကျချင်လာသည်…မီတာချမားလို့ ညဖက်ကြောင်းအေပ်ါထပ်တွေ မီးပိတ်ထားတော့ ဘိတွေဖြဈကုန်ကြပြီထင်
ဒါတောင်…ကေလးကသွက်လက်ခကြ်ျခာပုံ.သိပ်မေပ်ါဘော်ဒါဆောင်ကြေးကလည်း..မနည်းပါ.တော်ရုံမိဘ မထားနိုင်တဲ့အနေအထားပါ.. .ဘော်ဒါနွင့် ကိုယ်ပိုင်ကြောင်းတွဲ ဖွင့်ထားပါသည်. သးသေျးချာခာနေရာလည်းမဟုတ်ပါ
ဒီကိစ္စမြိုးက…ကျမမွ ဖွင့်မေပြာလျင်. .ကိုယ့်ကေလးအတွင်းရေးမို့ ဖုန်းဖိရင်း.. အခြားမိဘ..သတိမထားမိဖြဈနေမွာရော သားမွေးထားသူတွေရော…သမီးမွေးထားသူတွေရောကြောင်းထောင်ထားကြေသာ..သူငယ်ချင်း တွေရောကို သတင်းပေး ချင်ျရ်ရေးပါသည်…
မိဘများ..ဆရာများ.. ခေတ်ကို..သတိထားကြပါ ညဘက်စာကျက်ဝိုင်းများကို..သတိထားကြပါ စာသင်ကျောင်း..စာသင်ခန်းများကိုလည်း.. .သတိထားကြပါလို့…..သတိပေးပါရစေ
မနကေ့ ကမြဆေးခနျးကို ultrasound ကွညျ့ဖို့သားအမိနှဈယောကျလာပါတယျ သူတို့သားအမိဝငျလာတုနျးကတော့..ရငျသားတဖကျမရှိ တဲ့ မိခငျကို လှမျးကွညျ့ရငျး.လူနာလို့ထငျမိတာပါ။
နောကျတော့မှ..ကမြသမီးလေးရာသီ မလာတာ 3လလောကျရှိပွီ..ဗိုကျမှာလညျး အလုံးပျေါနလေို့ဆိုမှ ကလေးဗိုကျကိုစပျးသပျကွညျ့လိုကျတော့..ဗိုကျထဲမှာ ကိုယျဝနျက 5လပွညျ့ခါနီးပါပွီ..း။
ကလေးရဲ့ အသကျကိုသခြောသိခငျြ လို့မှေးနမေ့ေးလိုကျမှ 13နှဈနဲ့ တဈလ..ဗိုကျထဲက ကိုယျဝနျက 5လ.. .ရှငျးရှငျးပွောရရငျ.အမှေးတောငျသခြောမပေါကျသေးတဲ့ .မကျြနှာ အေးအေးလေးနဲ့ ကလေးကိုကွညျ့ပွီး ကမြ ဘယျကနေ စပွောရမလညျးတောငျတှေးမရတော့ပါ
မတတျနိုငျအမကေိုရှငျးပွတော့ပွီး.သမီးရညျးစား ရှိသလားခြော့မေးတော့..ရညျးစားတော့မရှိ… အပြိုမဟုတျတဲ့ အဆောငျနသေူငယျခငျြး ဆီကဘောငျးဘီယူဝတျမိ သညျဟုပွောသညျ..လုံးဝ မဖွဈနိုငျဘူး..အမှနျအတိုငျးပွောဖို့နညျးနညျးလေး မာနျလိုကျတော့..မှ.တတနျးထဲနေ.သူငယျခငျြး နှငျ့. .ဟုဝနျခံလာလသေညျ။
fbပျေါမှာ ဟိုတလောကေ ခတျစားနတေဲ့ရကေူးကနျထဲကိုယျဝနျခုနှဈယောကျရတဲ့. မဟုတျတဲ့ post ကို ဖတျပွီး..အမကေို..ဘောငျးဘီ ကိစ်စနှငျ့ဖွီးတော့ အူကွောငျကွောငျအမကေ သို့လောသို့လော ဖွဈသညျ…။
ဒီအမနှေငျ့ လှတျထားလို့မပွီး..ငါဝငျပါမှ ဖွဈမညျ ဆိုပွီး ဆကျမေးမှ..ကမြ ဖငျထိုငျရကျကမြတတျ.. တတနျးတညျးကြောငျးသား..သူငယျခငျြးအခငျြးခငျြး အဆငျ့လောကျတှနှေငျ့ ..အတူနကွေသညျတဲ့ သူတို့ကိုယျပိုငျကြောငျးရဲ့….ညဖကျစာကွညျ့ခြိနျတှမှော. ညဖကျအတနျးလှတျတှထေဲသှားကွသော .အဲသလိုကလေးတှေ…တျောတျောမြားနပေုံရသညျ ..
သူပွောတဲ့ ဘောငျးဘီယူဝတျတဲ့ သူငယျခငျြး ကလညျး ရညျးစားမဟုတျပဲ အတူနကွေသညျတဲ့..ေ နာကျတတှဲကတော့ ရညျးစားပေါ့…7တနျးတှနေျော တခနျးထဲအတူတူ..ခြိနျးနကွေသညျတဲ့..3တှဲ ကဲ..ကလေးမို့ တခါတလမှေား သလားလို့ကွိမျရမေေးတော့ .ကွိမျရမေနညျးတော့ပါ…
သမီးတို့အတနျးက..အဲသလို ကွိုကျ ကွတာနညျးတယျ 9တနျး 10တနျးဆိုပိုခြိနျးတှကွေ့တာလို့ပွောတော့ ကမြ ပကျလကျလနျ ကခြငျြလာသညျ…မီတာခမြားလို့ ညဖကျကြောငျးအပျေါထပျတှေ မီးပိတျထားတော့ ဘိတှဖွေဈကုနျကွပွီထငျ… .
ဒါတောငျ…ကလေးကသှကျလကျခကျြခြာပုံ.သိပျမပျေါဘျောဒါဆောငျကွေးကလညျး..မနညျးပါ.တျောရုံမိဘ မထားနိုငျတဲ့အနအေထားပါ.. .ဘျောဒါနှငျ့ ကိုယျပိုငျကြောငျးတှဲ ဖှငျ့ထားပါသညျ. သးသေးခြာခြာနရောလညျးမဟုတျပါ
ဒီကိစ်စမြိုးက…ကမြမှ ဖှငျ့မပွောလငျြ. .ကိုယျ့ကလေးအတှငျးရေးမို့ ဖုနျးဖိရငျး.. အခွားမိဘ..သတိမထားမိဖွဈနမှောရော သားမှေးထားသူတှရေော…သမီးမှေးထားသူတှရေောကြောငျးထောငျထားကွသော..သူငယျခငျြး တှရေောကို သတငျးပေး ခငျြရျြရေးပါသညျ
မိဘမြား..ဆရာမြား.. ခတျကို..သတိထားကွပါ ညဘကျစာကကျြဝိုငျးမြားကို..သတိထားကွပါ စာသငျကြောငျး..စာသငျခနျးမြားကိုလညျး.. .သတိထားကွပါလို့…..သတိပေးပါရစေ
ပေါင်းဖက်ရန် အသင့်တော်ဆုံးအိမ်ထောင်ဖက် နေ့နံများ …
ပညာသင်နှစ် တစ်နှစ်အောက်မည် ဆိုသည်မှာ….